Jaban sheet bir goynta laser biraha qaybo warshad iyo shirkado | Ouzhan
Geedi socodka biraha xaashida waxaa ku jira goynta leysarka, oo inta badan adeegsada laser-waxtar sare si loo xardho loona jaro qalabka. Waxyaabaha birta xaashidu waxay leeyihiin astaamaha miisaanka khafiifka ah, xoogga sare, habsami u socodka korantada, qiime jaban, iyo wax soo saar tiro badan oo wanaagsan. Waxay leeyihiin adeegsiyo ballaaran.
Qalabka birta goynta birta ah ee birta ah - saxan saxanka qalabka mashiinka wax lagu gooyo
Farsamaynta ayaa si ballaaran loogu adeegsaday qalabka elektarooniga ah, isgaarsiinta, warshadaha baabuurta, qalabka caafimaadka iyo dhinacyada kale. Tusaale ahaan, kiisaska kumbuyuutarka, taleefannada gacanta, iyo MP3, biraha birku waa qayb aan lagama maarmaan ahayn. Intaas waxaa sii dheer, waxaa loo isticmaalaa soo saarida aaladaha caafimaadka, iyo sidoo kale meydadka gawaarida iyo xamuulka (xamuulka), fuselageska diyaaradaha iyo baalasha, miisaska caafimaadka, saqafka dhismaha (dhismaha) iyo codsiyo kale oo badan.
Faa'iidooyinka Shanghai Ouzhan sheet biraha qaybo otomaatiga goynta laser
Cutting Jarida Laser waxay leedahay heer sarreysa oo dabacsanaan ah, xawaare goyn deg deg ah, waxsoosaar sare oo wax soo saar leh, iyo wareega wax soo saarka oo gaagaaban. Haddii ay fudud tahay ama ay tahay qaybo isku dhafan, waxaa loo isticmaali karaa in si dhaqso ah loo garto loona jarjaro leysarka;
● Khafiifinta goynta tolidda, tayada goynta wanaagsan, heer sare ee otomatiga, hawlgal fudud, xoog yaraanta shaqaalaha, iyo wasakh la'aan;
● Waxay xaqiijin kartaa jarista buulka iyo buulkeeda otomaatig ah, taas oo hagaajinaysa heerka ka faa'iideysiga maaddada, qalab la'aan, iyo la qabsiga walxaha wanaagsan;
Cost Qiimaha wax soo saarka oo hooseeya iyo faa'iidooyinka dhaqaale ee wanaagsan.
Naxaas kartoo qaybo mashiinka goynta biraha biraha
Isticmaalka Goynta laser, qoditaanka laser, alxanka laser, daaweynta laser, calaamadeynta laser, daaweynta kulaylka laser, laser prototyping dhakhso, imaging laser iyo laser daaha oo dhan lagu baaraandegi karaa Ouzhan.
Hore: Qaybaha birta xaashida goynta leysarka
Xiga: Tayo sare leh OEM sheet cut laser biraha biraha